Raac bandhigga iPhone 11 toos ah. Wararka IPhone
Ma rabtaa inaad raacdo bandhigga iPhone 11 live? Hagaag, waxaan kuu sheegi doonaa sida aad u sameyn karto, labadaba si rasmi ah, adigoo raacaya kanaalada Apple, iyo marinkeena, iyadoo la raacayo toos ula socoshada soo bandhigida, ka faallooneysa wax walba oo Apple na tusto waqtiga dhabta ah, iyo sidoo kale falanqaynta ku xigta ee wax kasta oo ku dhacay casharkeenna live.
Haddii aadan rabin inaad wax dhaafto oo aad rabto inaad nala wadaagto warka annaga, nala wadaag fikraddaada kana qaybgal bulshada inteeda kale, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad gasho oo aad wax ka barato dhammaan qaababka aan ku dooneyno tuur si markaa berri, Sebtember 10, ku raaxayso mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan sanadka adduunka tiknoolajiyadda.
Apple waxay ku bixin doontaa dhammaan qodobbada bandhigga iyada oo loo marayo qaabkeeda rasmiga ah, labadaba websaydhkeeda (isku xirka) iyo marinkiisa rasmiga ah ee YouTube channel (isku xirka). Waxa kale oo aad kala socon kartaa Apple TV, iPhone iyo iPad iyada oo loo marayo barnaamijka dhacdooyinka Apple (isku xirka). Waa markii ugu horreysay ee ay shirkaddu ku darto kanaalka YouTube-ka warbaahinteeda soo jireenka ah, taas oo calaamad u ah in ay doonayso in dhacdadan ay yeelato saamaynta ugu badan ee suurtogalka ah.
Dhinaceena, waxaad toos ugala socon kartaa soo bandhigida kanaalkayaga YouTube (isku xirka) taas oo ah waxaan noqon doonaa laga bilaabo 18:30 (Waqtiga Isbaanishka) si loo jebiyo wararka xanta ah. Wadahadalka kanaalka ayaa loo suurta galin doonaa si aad nooga faallooto wax walboo aad ka fikiri karto, inta lagu guda jiro munaasabada lafteeda waxaad awoodi doontaa inaad ka faalooto wararka Apple noo soo bandhigeyso. Dhacdada ka dib, qiyaastii 23:45 pm (waqtiga Isbaanishka) waxaan si toos ah u heli doonnaa fiidiyowgeena, sidoo kale kanaalkayaga YouTube, halkaas oo aan ku falanqeyn doonno wax kasta oo la soo bandhigo, oo aad ka qaybqaadato wadahadalka kanaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Raac bandhigga iPhone 11 toos ah